Infegy Atlas: valiny manan-tsaina avy amin'ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Infegy Atlas: valiny manan-tsaina avy amin'ny haino aman-jery sosialy
Zoma Janoary 30, 2015 Alarobia, Febroary 4, 2015 Douglas Karr
Tsy hita tamin'ny ankamaroan'ny fikarohana hitako an-tserasera fa izy no mombamomba ireo antontan'isa nomena. Hitako fa diso ny statistika (matetika fanahy iniana) ary miorina amin'ny varavarankely misy ny toe-javatra mety na tranga tsy mahazatra. Na izany aza, zaraina na ahoana na ahoana. Raha ny zava-misy dia matoky aho fa saika misy mpanelanelana milaza aminao fa manana ny tamberim-bidy tsara indrindra izy ireo.
Tsy afaka ny ho tonga ny tsara indrindra ny tsirairay… ary ny tena zava-dehibe, ny tsara indrindra dia ny mizaka tena. Ny tontolon-kevitra manodidina azy dia mety ahitana ny haben'ny orinasa, ny vidin'ny fahazoan-dàlana, ny toetran'ny mpanjifa izay mitondra azy eo an-tampon'ny tsara indrindra. Vao haingana indrindra dia nahita fampitahana ireo rafitra CMS voamarika malaza indrindra aho - saingy tsy nisy na inona na inona endriny momba ny habeny sy ny tanjon'ny atiny izay navoaka, ny loharano ao anatiny hivelatra amin'ny CMS, ary ny fahafaha-mandanjalanja an'ny CMS amin'ireo mpanelanelana. Ny tsara indrindra amin'ny orinasa iray dia tsy ny tsara indrindra ho an'ny orinasa hafa - izany no antony DK New Media lasa mpivarotra loharano nandritra ny taona maro. Mampiasa ny tontolon-kevitra, mampifanaraka ny orinasa amin'ny vahaolana sahaza azy izahay.
Ity misy horonantsary mahafinaritra miresaka Infegy Atlas, sehatra fanaraha-maso ara-tsosialy izay ampiasaina hanampiana ireo marika handray fanapahan-kevitra tsara kokoa mifototra amin'ny resaka tena izy manerana ny media sosialy. Ao amin'ny ohatra asehonay etsy ambony, ny faharanitan-tsaina ara-tsosialy dia mety hanome fahatapahana ireo firmagraphics mifandraika amin'ny orinasa iray hifanaraka amin'ireo vahaolana tokony hialany na hahaliana azy ireo.
Infegy Atlas dia sehatra ara-tsiansa ara-tsosialy novolavolaina mba hamaliana fanontaniana amin'ny alàlan'ny sehatra efatra ifantohana:
Discovery - Miaraka amina teboka angon-drakitra maherin'ny 100, Infegy Atlas dia mamorona tantara ho azy hilazana anao ny zava-mitranga amin'ny foto-kevitrao, manasongadina ireo fisehoan-javatra lehibe rehefa mandeha ny fotoana, ary mamaritra ny angon-drakitra, mitondra anao mihoatra ny tabilao ary mahitsy ny valiny.
Comparison - Mihazakazaha lohahevitra tsy manam-paharoa enina indray mandeha, ary ny Infegy Atlas dia hanome anao fahitana lalina momba ny fampitahany, ny mampiavaka azy ireo ary ny zavatra iraisan'izy ireo. Miara-hamakafaka ireo tahiry, manome anao vaovao tsy azo atao amin'ny lohahevitra tokana.
Linguistics - Infegy Atlas dia ampandehanin'i Infegy Linguistics, mahay mamaky sy mandika lahatsoratra toa ny olombelona fa tsy rindrambaiko. Ity haitao ity, novolavolaina tao amin'ny Infegy nandritra ny fito taona mahery, ary mahavita famakafakana amin'ny fiteny sarotra, manome anao fanadihadiana azo antoka sy manankarena momba ny hevitra ara-tsosialy.
Data - Ny fanangonana tahiry sosialy lava indrindra ao amin'ny orinasa, azo avy amin'ny fantsona maro, namboarina mba hanehoana ny besinimaro, ary sivana henjana mba hahazoana antoka ny valiny marina sy azo itokisana
Ireto misy fomba 10 azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny maso ivoho:
Tags: infegy atlasInfegy Linguisticsfahitana ara-tsosialyfaharanitan-tsaina ara-tsosialyfampitahana amin'ny media sosialyhaino aman-jery sosialyhaino aman-jery sosialy
Tetika 7 hampitomboana ny famoronana atiny
Fanaraha-maso Advanced Reputation ho an'ny mpivarotra mailaka